Flashcards Deluxe 3.13 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.13 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
Application မ်ား ပညာေရး Flashcards Deluxe
Flashcards Deluxe ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
• Two smart study modes that automatically focus more on the cards you miss: Leitner andamore advanced Spaced Repetition mode
You can create flashcards either on your computer or directly within the app. If you don't want to make your own, you can browse and download flashcards the app's Shared Library.
စာလုံးကတ် Deluxe သင်ရုံသင်လိုချင်တာဘာမှအကြောင်းကိုလေ့လာရန်အသုံးပြုနိုင်သည့်သေးအစွမ်းထက်နှင့် Full-featured စာလုံးကတ် app ကိုသုံးပါရန်လွယ်ကူသည်။
(ရရှိနိုင်မယ့်အခမဲ့ Lite ဗားရှင်းရှိပါတယ်။ )
•အလိုအလြောကျသင်လက်လွတ်ကဒ်များအပေါ်ပိုပြီးအာရုံစိုက်ကြောင်းနှစ်ဦးစမတ်လေ့လာမှုသည် Modes: Leitner နှင့်တစ်ဦးပိုမိုအဆင့်မြင့် space ထပ်ဖြစ် mode ကို
•မိန့်ခွန်းမှစာသား 18 ဘာသာစကားများ (၏ TTS) အသံဖိုင် (လေ့လာဖို့လိုအပ်မျှအင်တာနက်ချိတ်ဆက်)
•အကွိမျမြားစှာရှေးခယျြမှု option ကို
•ဖိုလ်ဒါထဲမှာကုန်းပတ် Organize နှင့်လေ့လာနေဘို့ကုန်းပတ်ပေါင်းစပ်
• (ကောင်းကင်ပြာ, သစ်သား, chalkboard, etc) ကနေရွေးချယ်ဖို့အများအပြားစာလုံးကတ်အရောင် themes များ
• Divide ကတ်များအမျိုးအစားသို့
• 1 မှ5တဖက်သတ်ကတ်များ
•ပုံနဲ့အသံပါ။ ရုပ်ပုံများသို့ချဲ့။ အော်တိုထပ်အသံ။
•3တုံ့ပြန်မှုအဆင့်ဆင့်: မှားငါကြင်နာသိ, ငါသည် (မှားယွင်းတဲ့ / စံမှန်ကန်သော vs) တကယ်ကောင်းစွာသိကြ - ပိုပြီးထိရောက်လေ့လာနေဘို့
•လွယ်ကူအညွှန်း - ပွတ်ဆွဲသို့မဟုတ် (စိတ်ကြိုက်) ဖြေဆိုရန်ကိုအသာပုတ်
•သင့်လက်ညှိုးနှင့် Self-အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောအဖြေကိုခပ် (ကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်ကြ drawing)
•အလိုအလျောက်သူတို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတစ်အချို့အရေအတွက် / ရာခိုင်နှုန်းပြင်ပေးရတဲ့ပြီးနောက်ချွတ်ကတ်များကိုဖွင့်
Full-screen နှင့်ရှုခင်းကြည့်ရှုအပါအဝင်•သန့်ရှင်း, ထိရောက် user interface ကို,
•သင်အလွယ်တကူရမှတ်စောင့်ရှောက်ခြင်းမရှိဘဲရှေ့ဆက်သို့မဟုတ်နောက်ကျောသွားလာနိုင်တယ် Browse ကို mode ကို
•စလိုက်ရှိုး mode ကို
•ကတ်များ (10,000+) ၏အကြီးစားအရေအတွက်ကအလွယ်တကူတင်သွင်းနိုင်ပါသည်
•သင့်ကွန်ပျူတာမှ Backup ကိုသင့်ရဲ့စာလုံးကတ်
• Dropbox နဲ့ Google Drive ကိုထောက်ခံကြောင်း
•အဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများအတွက် features နဲ့ options များစွာနှင့်အတူစတင်ရန်အလွန်လွယ်ကူပါတယ်
•ဂရိတ်ထောက်ခံမှု! ကျွန်မချက်ချင်းသငျသညျရှိစေခြင်းငှါမဆိုမေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ချက်တုံ့ပြန်ကြသည်။ ငါ၏အက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ပြည်သူ့ဖိုရမ်ကိုအသုံးပြုပါသို့မဟုတ်ငါ့ကိုအီးမေးလ်ပို့။
သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက် app ကိုအတွင်းဖြစ်စေစာလုံးကတ်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ချင်ကြပါဘူးလျှင်သင် app ကိုဖွင့် Shared စာကြည့်တိုက် browse နှင့်စာလုံးကတ်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက် OrangeOrApple.com မှာကြှနျုပျတို့၏ website ဖတ်ရှုပါ။ သင်သည်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက်ထုတ်ကုန်တွေနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုမဟုတျပါလျှင်ငါ့ကိုအဘယ်ကြောင့်သိစေခြင်းနှင့်ငါကကူညီရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်ပါ။
Flashcards Deluxe အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Flashcards Deluxe အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Flashcards Deluxe အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Flashcards Deluxe အား အခ်က္ျပပါ
donkarleon စတိုး 24.94k 5.48M
Flashcards Deluxe ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Flashcards Deluxe အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.13
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://orangeorapple.com/Flashcards/PrivacyPolicy.aspx
Release date: 2019-06-20 12:04:46
လက်မှတ် SHA1: 3A:EC:31:36:30:E2:DF:03:04:87:6F:AA:CD:9E:22:8B:B2:48:F3:BC
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Ernest Thomason
အဖွဲ့အစည်း (O): Flashcards Deluxe
Flashcards Deluxe APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ